प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि किन उठाए राजीनामाको मुद्दा ?
कार्तिक १९, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — विवाद गम्भीर संकटतर्फ मोडिएर नेकपाको एकता नै संकटमा परेको समाचार प्रकाशमा आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजीनामा मागिएको खुलासा गरेका छन् ।
तर, यसपाली विगतमा जस्तो उनले राजीनामा माग्ने शक्ति र पात्रबारे स्पष्ट भनेका छैनन्, बरु यस्तो राजीनामा पार्टीभित्रैबाट मागिएको संकेत भने दिएका छन् ।
पछिल्लोपटक दुई अध्यक्षबीच तित्तक्तापूर्ण संवाद भएका छन् र नेकपामा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालसमूहबीच धुव्रीकरण सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ नेकपामा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसमूहले सचिवालय बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आएको छ ।
पार्टीभित्रबाट आफूमाथि दबाब हुँदा विभिन्नसमयमा राजीनामा मागिएको प्रसंग उठाउँदै आएका ओलीले यसपाली पनि त्यस्तै सूत्र अगाडि सारेका छन् । वैशाखयता उनले राजीनामा मागिएको विषय उठाएको यो तेस्रो पटक हो ।
केहीदिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक पनि नबस्ने र बहुमतले गरेका निर्णय पनि नमान्ने बताएका थिए । यस सन्दर्भमा पार्टीभित्र बहुमत सदस्यले उनको राजीनामा माग्ने तयारी गरिरहेको हुन सक्ने आंशका पैदा भएको छ । २६ भदौको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओली तयार नभए अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसमूह बहुमत सदस्यको बैठक बोलाउने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
बुधबार बिहान चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि परिस्थितिमा आफूले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । गैरराजनीतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सन्देश दिँदै भनेका छन्, ‘तपाईंहरु विचार गर्नुस के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ ? राजीनामा दिन मिल्छ ? मेरो लागि होइन, देशको लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादितिर जान दिनु हो । त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन । त्यो मैले दोहोर्‍याएर भनेको छु, फेरि केहीले खोइ त राजीनामा भनेर मागिराखेका छन् । बेकारको कुरा हो भन्ने सोच्छु ।’
वरिष्ठ नेता नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भने दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भनेर आफूहरु बोलिराखेको बताइन् । ‘उहाँ दुवै पदबाट हट्नुपर्छ । अब अति भयो, असह्य भयो । झूट बोलेर मान्छेलाई भ्रम पारेर पीडा दिन पाइन्छ ? उहाँले पार्टी पंक्तिलाई मात्रै होइन आम जनतालाई पीडा दिइराख्नु भएको छ । अहिले जथाभावी बोलेर, धम्काएर शासन सत्ता चलाउँछु भनेर चल्दैन,’ शाक्यले भनिन् ।
तर, अध्यक्ष दाहाल निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह अहिले कसैले राजीनामा मागेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘अहिले कसैले राजीनामा मागेको मलाइ थाहा छैन । तर, उहाँ मनोवैज्ञानिक दबाबमा हुनुहन्छ । तपाईंले ठिक तरिकाले काम गर्नुभएन भने पार्टी कमिटीबाट तपाईंको राजीनामाको प्रस्ताव हामी ल्याउन सक्छौं भन्ने तरबार झुन्डिएको छ । आजको अभिव्यक्ति त्यसको मनोवैज्ञानिक असर हुनसक्छ,’ साहले भने ।
प्रधानमन्त्री निकट नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले पार्टीभित्रबाटै भ्रम छर्ने काम भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बोल्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् । ‘अहिले निरर्थक ढंगले आम जनता, कार्यकर्तालाई भ्रमित तुल्याउने प्रयत्न भएका छन् । अर्को, समझदारी कार्यान्वय नगर्ने नियत यसैबाट देखिन थालेको होकि भन्ने प्रश्न पनि उठे होलान् । विभिन्न समूहका छलफल, भेलाहरुमा यी विषय उठ्यो भनेर सार्वजनिक भइसकेपछि पार्टीपंक्ति र आम जनतामा यसबारे भ्रम हुने भयो । त्यसलाई प्रष्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री आफैंले त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने स्थिति आयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बदल्न भित्र र बाहिरबाट अनेक थरिका प्रयासहरु भएको पनि बताएका छन् । ‘म यस ठाउँमा आएको मेरा रहरले होइन जनताको आवश्यकता र समर्थनले हो । यहाँ पुर्‍याएको म जालझेल तिकडमबाट होइन । यहाँ पुगेको व्यापक जनसमर्थनबाट हो । त्यसकारण तपाईंहरु ढुक्क भएर काममा लाग्नुस । यो सरकार फेरिन्छ कि धेरैले धेरै प्रकारका कोसिसहरु गरे । भित्र, बाहिर अनेक थरिका कोसिसहरु आए । जेमा पनि आलोचना गर्ने, जेमा पनि आलोचना गर्ने । त्यस प्रकारका प्रवृति छन् त्यसबाट प्रभावित नहोऔं ।’
१५ कात्तिकमा दाहालसँगको भेटमा र अर्को दिनको टेलिफोन संवादमा ओलीले बहुमतको निर्णय नमान्ने र दाहाल नेपाल समूहले कुनै निर्णय लिए त्यसभन्दा ठूलो कमद चाल्ने बताएको दाबी नेताहरुको थियो । कर्णाली प्रदेश विवाद बढ्दै जाँदा दुई अध्यक्षबीच तनावपूर्ण संवाद भएका छन् । यसै शिलशिलामा १५ कात्तिकमा ओलीले अलगअलग बाटो अपनाउने प्रस्ताव गरेको दाहालले सचिवालयका अन्य पाँच सदस्यालाई सुनाएका थिए ।
नेकपामा २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने’ बुँदामा ‘अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने’ निर्णय भएको थियो । अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने’ उल्लेख छ ।
यसमा अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने पनि समेटिएको छ । कार्यविभाजनसँगै सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय थियो । तर, दाहाल–नेपाल समूहले निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरेर ओलीले पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिएको बताएको छ ।
वैठकले ‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श रसहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने’ भनिएको थियो । तर, स्थायी कमिटीका निर्णय सवै अलपत्र छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको प्रसंग उठाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि जेठ १४ मा बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा जारी गरेबापत भारतीय राज्य संयन्त्र र आफ्नै पार्टीका नेताहरु सरकार ढाल्न सक्रिय रहेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका दुई वर्षे कार्यकालका उपलब्धि सुनाएको अर्को दिन अर्थात फागुन ५ मा गृहजिल्ला झापा पुगेर ‘सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र’ भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यतिबेला उनको इसारा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागेको भन्ने थियो । स्थायी कमिटी सदस्य साह थप्छन्, ‘भित्र भित्र उहाँमा बहुमतबाट दबाब आउन सक्छ भन्ने डर छ । तपाईंले अहिले राजीनामा दिने होइन तर, स्वच्छाचारी प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्नुभयो भने तपाईलाई अंकुश लगाउन सक्छौं भन्ने त छ नि । त्यसैले उहाँले राजीनामा दिन्न भनेको होला ।’
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ २२:४५